Mgbe nile n’ozi ọma dị mma, mma ngwaahịa dị mma, ọrụ azụmaahịa echere, mebe ezigbo aha ahịa na ụlọ ọrụ ihe nkiri.
Banyere nkọwapụta ụlọ ọrụ
Ntọala na 2017, Shuyang Genzon Novel Materials Co., Ltd (nke a na-akpọ “GENZON Novel Materials") nọ n'okpuru njikwa GENZON nke na-ahụ maka njikwa ya na arụ ọrụ ya.
Otu isi R&D, nke onye dibia bekee mụsịrị na America, guzo na Silicon Valley iji nweta teknụzụ ndị ụwa na-eduga testlọ ọrụ ule ihe ọkụkụ dị elu na-enyere aka ịhazi ihe ọhụrụ na mmepụta, ọmụmụ na nyocha Ngwakọta ụzụ polyester rụrụ arụ, ụwa juputara n'ihe gbasara ọgụgụ isi na teknụzụ nweere onwe ya
ihe mkpuchi ihe eletriki
ihe mkpuchi ngwa eletriki
Gbado anya na Akụrụngwa GENZON Novel, mara onwe gị na usoro ụlọ ọrụ, ma na-echeta ihe ndị GENZON Novel Materials gbara gị gburugburu.
Kemgbe Genzon Novel Akụrụngwa rụzuru njikọ na ịhazigharị akụ ma mezuo mbido usoro mmepụta, n'aka nke…
212020 / Ọgọst
Tụnyere nke usoro mmepụta ...
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ usoro mmepụta abụọ dị iche iche dị na ụlọ ọrụ BOPET, otu bụ ịkpụ nsị, onye ọzọ na-agbaze. Tupu afọ 2013, ahịa a kacha dabere na usoro iberi, whi…
Ọnọdụ ugbu a na atụmanya o…
PX bu isi akụrụngwa na ụlọ ọrụ polyester niile ， Mgbanwe nke ụlọ ọrụ ya nwere mmetụta dị oke mkpa na ụlọ ọrụ niile akọwapụtara. ibido tinye mmepe nke…
Ihe ndi ozo di na Genzon.
Na 28th nke Septemba, emume ime obodo nke 2019 Suqian Green Industry Expo mere emume Nnukwu na nnukwu ụlọ ihe ngosi nke Suqian. Isi okwu nke Green Fair a bu “akwukwo ndu, jikota onu ma wuli elu…